NDI ỤKA AMALITELA NGAGHARỊ IWE – hoo!haa!!
Ndi ụka Kraist n’ala anyị niile malitere ngagharị iwe ụnyahụ bụ Ụka, iji gosi iwe ha maka ogbugbu ana-egbuzi ndi mmadụ n’ala anyị ka ana-egbu ọkụkọ.
Ọbụ n’izu ụka gara aga ka otu jikotara ndi ụka Kraist na Naiririya niile akpọrọ Christian Association of Nigeria, CAN, gwara ndi otu ha ka ha mee ngagharị iwe ka ụwa were mara na ihe oke na-ata na Naijuriya, na ntị na-anụ ya. CAN metụrụ aka na iwe ha dị iche iche ma bịazia gbadoo ụkwụ na onweghị ihe gọmenti na-eme iji gbochi arụrụmanị ndia.
Ọbụ nkea mere na ndi otu Kraist n’ọtụtụ ebe n’ala anyị malitete ngagharị iwea.
N’Legọs, emebeghi ngaghari iwea, amabeghị ebum n’obi ha.
Ọfọrọ nwobere ka ndi ụka Ondo si na ikute ụtaba baa ime ahia, ebe ndi ụka jiri iwe chọọ ichụpụ osote aka na-achị steeti ahụ bụ Agbola Ajayi mgbe ọ chọrọ igwa ha okwu, ndi ụka ahụ foro ntụtụ ha taa kwue na ọbụ aka na-achị yabụ steeti ka ha chọrọ ịnụ olu ya. Ha gosiri iwe ha na agbanyeghị na ha mere ka aka na-achị yabụ steeti mara maka ọbịbịa ha, na ọ gbarapụrụ ha were pụọ.
Na steeti Ọyọ, ndi ụka nọ n’Ibadan sonyekwara ogbo ha ndi ọzọ mee ngagharị iwe. Ndi Ibadan agagharịghị n’ogbe n’ogbe, mana ha nọrọ n’ogige ụlọ ụka ha dị iche iche wee kpọkue gọmenti ala anyị ha, ka ha mara ka esi wepu aka enwe n’ofe tupu ọghọọ aka mmadụ ‘nogbugbu ana-egbu ndi otu Kraist n’ala anyịa.
Ọbụ onye isi ndi CAN bụ Dọkịnta Supo Ayokunle duru ha ije ma nọrọ na ogige ụlọ ụka ha bụ Oritamefa Baptist Church nke Ibadan gosi ihe bu ebum n’obi ha dịka ha siri dee ha n’akwụkwọ nke gụnyere “Gọmenti ala anyị, kwụsị ogbugbu mmadụ aghara aghara, CAN ajụla ogbugbu ana egbu ndi mmadụ maka okpukpe ha”… were gabazia
Okwurụ na, ka mgbe afọ puku abụọ na itolu ka-amalitere na-awụfụ ọbara ụmụ mmadụ n’efu, n’okpuru gọmeenti di iche iche chigoro ala anyị.
Na steeti ekiti, ọtụtụ ndi ụka mere ngagharị iwe n’Ado Ekiti nakwa obodo ndi ọzọ dị na steeti ahụ.
Notu aka ahụ emekwara ngagharị iwe na steeti Ọsun, Ananbara nakwa Abuja bụ ebe anọrọ na ogige isi ụlọ ụka ndi ala anyị bụ National Christian Centre mee ma kwukwa ọtụtụ okwu.
Mgbe okwuru okwu Chukwu na ofufe nke ndi ụka dị iche iche jikọrọ aka fee, ka Bishọp Pita Ogunmuyiwa nke African Church dayọsisi nke Abụja sịrị na ogbugbu ana-egbu ndi otu Kraist bụ ka ememilaa ikpere Kraist n’ala anyị ma tụgharia ala anyị ka ọbụrụ nke ndi alakuba. Bishọp a, bụ onye duru ndi ụka na Abụja mee ngaghari iwea kwuru na ebe ejighị enyo ele ihe agba n’aka, na ọbụ nkea kpatara gọmenti ejighị chọọ ime ihe ọbụla gbasara ogbugbu ana egbu ndi mmadụ n’ala anyị.
Na steeti Benue, ndi CAN steeti ahụ kpọrọ oku ka buhari were ọsọ wụsa ọwara ọchịchị ebe ọbụ na onweghị ike ịkwụsị arụ na ntigbu na nzọgbụ na-aga n’ihu n’ala anyị.
Otu CAN ahụ yọrọ mba akụkụ ụwa ndi ọzọ ka ha gbata nye aka n’ihi na yabụ ichi ana-egbu eruela n’iku anya. Ha sịrị na ogbugbua ana-egbu na steeti Benue bụ nke eji akpọku otu okpukpere dị iche iche ka ha pụta na ọgụ eruela. Ha sịrị na ekwesịrị ṅikwụsị nkea. Ọbụ onye isi CAN na steeti Benue duru ha na njem ngagharị iwea ma kwukwa ihe ndia.
Na steeti Taraba, akwụ sokwe ibe ya gbaa mmanụ, ebe ndi ụka nọrọ n’isi ụlọ ọrụ CAN steeti ahụ dị na Jalingo mee ngaghari iwe nke ha.
Anyị ga-agakwa ‘n ihu iwetara unu akụkọ gbasara ngagharị iwea ka ha si abiara anyị
Previous Post: AGBAM-AKWỤKWỌ Ọ GHỌỌLA AGBAM-ỌTỌ?
Next Post: EGWU(FEAR)/EGWU/EGWUREGWU (PLAY)